M 23 ဆိုတာ ဘာလဲ? > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ဆောင်းပါး / M 23 ဆိုတာ ဘာလဲ?
M 23 ဆိုတာ ဘာလဲ?
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ July 29, 2015 ဆောင်းပါး Leaveacomment 198 Views
ရေးသားသူ: ဆောင်းပါး > အံက်သာ(သောင်ပြင်)
M 23 Logo(Copy)
အံက်သာ(သောင်ပြင်) – မွန်နိုင်ငံရေးလောကမှာ မကြာသေးခင်ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ M 23 ဝေါဟာရသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ယက်အင်တာနက် Facebook တွေမှာ လူငယ်တွေက M 23 ဆိုတာ ဘာလဲ? M 23 ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိလိုကြတယ်။ လက်ရှိမွန်နိုင်ငံရေးလောကနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဘယ်လိုကြောင့် M 23 ထင်ရှားလာတာကို မွန်အမျိုးသား တွေအတွက် ရည်ညွှန်းပြီး ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မွန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်အမတ်လောင်းတွေ မဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မွန်လူငယ် ၂၆ ဦးတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်အကျရက်(၁၄-၄-၂၀၁၅) မနက် (၁၀) အချိန် မော်လမြိုင်မြို့ အတ္ထရံဟိုတယ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရာကနေ M 23 အစပြုသန္ဓေတည်ခဲ့တာပါ။ အစုအဖွဲ့အသင်းအပင်း အသီးသီးတွေဆီက ရောက်လာကြတဲ့့ ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၂၆ ဦးဟာ မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘဲ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကအမြင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒုတိယအကြိမ် ဆက်လက်တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ တက်ရောက်သူတွေလည်း ပိုမိုများပြားလာသလို အတွေးအမြင်တွေလည်း ပိုမိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာတော်နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုနဲ့အတူ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေ M 23 ကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အဖွဲ့ဝင် ၂၃ ဦးအခြေခံတဲ့ “လွတ်လပ်သော မွန်အမျိုးသား ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့” ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက် M 23 ဆိုပြီး အမည်နာမတွင်ခဲ့တာပါ။
M 23 ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်အမျိုးသားကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အတွက်များများ မဲအောင်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီအဖွွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရပါသလဲဆိုရင် လက်ရှိ မွန်နိုင်ငံရေးလောကမှာ မွန်ပါတီတွေ ၂ (ဝါ) ၃ ပါတီဖြစ်နေလို့ပါပဲတဲ့။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မဲအောင်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရမလဲဆိုတာ မွန်လူထုနဲ့ သံဃာတော်တွေဆီက ထွက်ပေါ်တောင်းဆိုသံတွေကို ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ သံဃာတော်တွေ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့့ မွန် ၂ ပါတီပေါင်းစည်းရေးဟာလည်း အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် သံဃာတော်တွေရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလို M 23 ဆက်မလုပ်ပါ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်အချင်းချင်းမယှဉ်ပြိုင်ရေးအတွက် မဲဆန္ဒနယ်မြေညှိနှုိင်းရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းက သက်ဆိုင်တဲ့ မွန် ၂ ပါတီကို စာရေးအသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယအဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားကာလအတောအတွင်းမှာ ၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်း နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့ပေမယ့်လည်း မွန် ၂ ပါတီအပေါ် တောင်းဆိုထားချက်တွေ အလားအလာမကောင်းခဲ့ပါ။
ဘက်နှစ်ဖက်အနေအထားအရ မဲဆန္ဒနယ်မြေညှိနှုိင်းသတ်မှတ်ရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ အခြေအနေမပေးတော့တဲ့အတွက် M 23၊ (၁၉၉၀+၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင် မွန်သံဃာတော်တွေနဲ့အတူ (၁၇-၇-၂၀၁၅) ရက်နေ့က သံဖြူဇရပ်မြို့၊ နန္ဒဝိုန် မွန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှာ တွေ့ဆုံကြပြီး အပြန်အလှန်အမြင်ချင်းဖလှယ်ကာ အဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့(၁၈-၇-၂၀၁၅) မှာတော့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ M 23 တို့ မော်လမြိုင်မြို့၊ ရာမညဟိုတယ်မှာ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အချက် ၅ ချက်ပါ ထုတ်ပြန်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို M 23 ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မွန်အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြား အသံမျိုးစုံထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။ “သံဃာတော်တွေဦးဆောင်ညှိနှုိင်းတာတောင်မှ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ M 23 ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာ မဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ညီညွတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်၊ နတ်ပြည်ကသိကြားမင်းလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို မိမိပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတစ်ခုလို သတ်မှတ်ထားပြီး အတ္တနဲ့ပရဟိတကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဝေခွဲမနိုင်သူတွေနဲ့ ညီညွှတ်ရေးကို ဘယ်လိုမှလည်း တည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးက M 23 ကို မြွက်ကြားခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
“လက်ဝှေ့ဝတ်စုံဝတ်ပြီး စင်ပေါ်ရောက်နေခိုက် ကြောက်ဒူးတုန်ပြီး စင်ပေါ်ကနေဆင်းပြေးလိုက်တဲ့သမိုင်း အဖြစ်မခံပါနဲ့၊ ရဲရဲသာထိုးပါ ကျုပ်တို့အားပေးတယ်” လို့လည်း နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးက ဆက်လက်မိန့်ဆိုပါတယ်။ “၂၀၁၅ မှာမွန်အမတ်တွေများများရဖို့ဆိုတဲ့့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အမတ်များများရလာရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့၊ အမတ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်၊ ၂၀၀၈ မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင် အမတ်ပေါင်း ၁၀၀ ရရင်လည်း ဘာတွေလုပ်ဆောင်သွားမလဲ၊ အခု လောလောဆယ် ဘာကိုဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်တာကိုပဲ အဖြေရှာကြပါ” လို့လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် မွန်ပါတီတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလျှောက်လှမ်းခဲ့ရင် M 23 လည်း ခုလိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ ခုလိုလည်းပြဿနာတက်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး၊ ပြောသလိုလည်းဖြစ်မလာတော့ ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ဆက်လုပ်ကြ” လို့လည်း ပြောစကားသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။ M 23 ကိုလည်း အမျိုးမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ထောက်ခံသူက ၈၀% လောက်ရှိပြီး မနှစ်သက်သူတွေကတော့ လူနည်းစုဖြစ်တယ်လို့လည်း ယူဆရပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီး M 23 ဘယ်လို ဆက်လက်လှုပ်ရှားမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးက သံဃာတော်တွေရဲ့သြဝါဒကို ခံယူပြီး မြို့နယ်အဆင့် M 23 အဖွဲ့တွေကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်။ မြို့နယ်အလိုက် လူငယ်၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ M 23 ပူးတွဲပြီး မွန်ပါတီတွေထဲက အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမတ်လောင်းတွေကို ထပ်မံရွေးချယ်သွားမှာပါ။ အရည်အချင်းဆိုတာကတော့ လူထုအကျိုးပြုနိုင်သူ၊ အမျိုးသားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိအမြင် နားလည်သိရှိသူတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလျှင် မဲဆန္ဒနယ် ၄ ခုရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုမှာ AMDP နဲ့ MNP အမတ်လောင်း ၄ ဦးစီ လျာထားတယ်ဆိုပါစို့၊ အဲဒီ ၂ ပါတီကလာတဲ့ စုစုပေါင်း ၈ ဦးထဲက ဒေသခံတွေထောက်ခံတဲ့ ၄ ဦးကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး M 23 အနေနဲ့ မဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ၊ ဒေသခံတွေအများဆုံး ထောက်ခံတဲ့ အမတ်လောင်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ ပါတီအလိုက်အချိုးကျစနစ်လည်းမဟုတ်ပါ၊ ကျန်ရစ်တဲ့ ၄ ဦးကတော့ မိမိအတွက် မိမိတို့ဖာသာ ကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒေသခံတွေ အများဆုံးထောက်ခံမှုရရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် အလားအလာအရှိဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ကျနော်တို့မွန်အမျိုးသားတွေဟာ လက်ရှိအနေအထားမှ ညီညွတ်အလွန်အားနည်းတဲ့ကာလလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ တဖက်နဲ့တဖက် အတူတကွပူးပေါင်း လက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထား မရောက်ရှိနိုင်တာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ စာပေသမားတွေအနေနဲ့လည်း သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး ချင့်ချိန်ရေးသားနေကြရတဲ့ကာလတွေပါ၊ အဖြစ်မှန်တွေကနေ မလွဲမှားစေလိုသော်လည်း ဒဲ့ပြောလိုက်ရင် တဖက်စောင်းတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြန်ပါရော၊ အရပ်စကားနဲ့ဆို ခြေကျိုးသူကို ငကျိုးလို့ခေါ်မိရင် ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝလိုပါပဲ။ လူသားတိုင်းဟာ ဖြောင့်မတ်သူချည်းပါပဲ၊ သို့သော် ကိုယ့်အကြောင်း ဒဲ့ကြီးဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ပြောလာရင် လက်မခံနိုင်တာကလည်း ဒီလူသားတွေပါပဲ။
ကျနော်တို့ မွန်တွေအနေနဲ့ တစ်ပါတီကနေ နှစ်ပါတီ၊ ခုဆိုရင် သုံးပါတီဖြစ်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ အမျိုးသမီးပါတီ(မွန်)အနေနဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ အမတ်လောင်း တစ်ဦးစီဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် M 23 နဲ့ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ (၁၈-၇-၂၀၁၅) ရက်နေ့ ရာမညဟိုတယ် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲမှာ အမျိုးသမီး(မွန်)ပါတီ ဥက္ကဌ မိသန်းရှင်(မိလျိုင်မန်) ကို အများတကာ ချီမွန်းထောပနာပြုခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
“ကျမတို့ အမျိုးသမီးပါတီအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ရရှိအောင်ဆိုပြီး ပါတီတည်ထောင်ခဲ့တာပါ၊ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လည်းရထားပြီးပြီ၊ လိုအပ်တဲ့အင်အားတွေလည်းရှိနေပါပြီ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လည်း စီစဉ်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ကျမတို့လူမျိုးအနေအထားက အစ်ကိုယ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ပါတီကြီး ၂ ပါတီရှိနေတော့ ကျမတို့ညီမငယ်တွေက အလျော့ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ကျမတို့ပါတီရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ၃ နေရာပဲ ဝင်ပြိုင်တော့မှာပါ၊ ပါတီကြီးတွေ ဝင်ရောက်မယှဉ်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာ ၃ နေရာဝင်ပြိုင်ခွင့်ပြုပါ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအပေါ် အနစ်နာခံပေးတဲ့ကျမတို့ အမျိုးသမီးပါတီတွေထက် အမျိုးသားတွေဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီတွေ သဘောထားမသေးသိမ်ကြပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်” လို့ မိသန်းရှင်ရဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်တွေကြောင့် အမျိုးသမီး(မွန်) ပါတီ အနာဂတ်ခရီးကို အများက နားလည်သိရှိလိုက်ပါပြီ။
အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက မွန် ၃ ပါတီဟာ အန္တိမပန်းတိုင်အတူတူဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကောင်အထည်ဖော်မှု နည်းဗျူဟာပိုင်းတွေမှာ ခြားနားမှုရှိကြစမြဲပါ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဒီ ၃ ပါတီလုံးလက်ခံကြတာ မဟုတ်ပါ။ တရားဥပဒေဘောင်တွင်းကနေ တည်ဆဲဥပဒေအရ ပါတီရပ်တည်ရေးအတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေလက်ခံကြောင်း လက်မှတ်မရေးထိုးရင် ဘယ်ပါတီမှ တည်ထောင်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ပြည်သူ့ထံပေးတဲ့(Messaging) တော့ မတူညီကြပါ၊ AMDP အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ မွန်အမျိုးသားတရပ်လုံးအတွက် အဆင့်တစ်ဆင့်ကို လှမ်းတက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ MNP ကတော့ ၂၀၀၈ ကိုလက်မခံ၊ ၂၀၀၈ မပြင် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်လို့ ယခင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး(မွန်) ပါတီကလည်း အမျိုးသမီးတွေရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် အမျိုးသမီးတွေကို မွန်နိုင်ငံရေးလောကထဲ ခေါ်သွင်းလာနေပြီ။ ပြည်သူတွေကို မိမိတို့ပေးထားတဲ့ ကြွေးကျော်သံအတိုင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပါလျှင် M 23 ဟာလည်း ခုလိုပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်း မရှိပေ။ သို့သော်လည်း ခုလိုဖြစ်ရပ်တွေကိုတော့ တရားသဘောနဲ့သာ ဖြေသိမ့်စေလို။ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ၊ သူဖြစ်နေသလိုပဲ ထားလိုက်ပါတော့၊ ဖြစ်ရှိလာတဲ့ ပကတိဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားရမှာပါပဲ၊ ဒါကြောင့် M 23 ဆိုတာ ဘာလဲ? ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီနေရာကနေ နိဂုံးအဆုံးသတ်ပါရစေ။
မှတ်ချက်-မူရင်း M23 ဂှ်မုရော? မွန်ဘာသာဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်(အယ်ဒီတာ)
ဆောင်းပါး အံက်သာ(သောင်ပြင်) 2015-07-29
Tags ဆောင်းပါး အံက်သာ(သောင်ပြင်)
Previous နိုင်ဟံသာနှင့် မေးမြန်းဖြေကြားချက်
Next မွန်ပါတီများ မဲဆန္ဒနယ် ၅၀ ကျော်ဝင်ပြိုင်မည်ဟုဆို